Jaalatamoota Gootoota QBO, Hayoota Oromoo fi Hawwassa Oromoo hundaaf
Yerroo Aman Kana Oromoon hamileen Cabdee, enyumaa isaati qanfatee, nama gadii ta'ee jira. GPO akka bakka bu'aa ummataa Oromooti rakkoo Oromoo irra isaaf dhiyyatuu irrati hundau'dhan akkasumasii Baratoon University 15 iyyata galchatan bu'uureefachuun Dhaabileen Oromoo Haala duree tokko malee gurmu QBO akka deebisan ijaran fi tokkumaa akka humatan goochuun dhimma kana OSA akka xumuruu itti wal galee jira. OSA ilee marii dheera erga gegesee booda rakko Oromoo furun dirqama koo keessa tokko jeechuun gaafi GPO kana fudhatee dhabbilee Oromoo ararsuuf wal galee jira.
Rakkon Oromoo ama mudatee kun humna dhabbilee Oromoo qaban birra darbee jira. Iniis "Oromo National Crisis" ykn Jeequmsaa fi cabiinsa hamilee saba keenya jeechudha. Sabii Oromoo oogansa dhabuuun, dhabilee Oromoo cacabuun, gurmuun hawwasaa diggamun, Lelisitoon Amanta fi Ganda dagaguun (oftii amanu dhabuu), diina dhisaan waltii booba’uun, maanndhedhan gurman wara hojeetu irrati ololuu, media Oromoo diina dhisee Oromoo irrati akka hojeetu goochuun National Crisis kan fideedha. Waluma Galati Lafachuun dhaabilee Oromoo fi hawwassa Oromoo diini Oromoo tufatee akka barbaduu irrati geeraruu dandeesisee jira.
Gootoon Dhugga Oromoo garuu bara median amayya email, internet, paltak, skype fi bilbili hin jiiratiin dhaabba cimmaa ijaran, hawwasaa Oromoo sochosan QBO asiin ga’aan gootata Ummurii gutuu heeduu qabna. Gootoon Ummurii gutuu jiruuf jireenya isaan, maatii fi qabeenya isaan qabsoof wareegan harik caaluu mana hidhati ummurii gutuu dararama kan turan, dhalan mucaa yerroo arguu qabanti Bilisummaa Oromoo olfahamee jiru akka mucaa isaanti lakawn, diinati utuu harka hin keenin gootota Oromoon qabduu kumata ga’aan jiru isaan kana kessa hangafoota gootota QBO hanga waregama lubuti iitfufan jiran keessa haraa murassa asiti afeeruu yaalee jira. Goototaa Oromo Umuri Gutuu QBO cihcan akka Obbo Ibsa Guutama, Abiyuu Galata, Ahimad Husen, Mulugeta Mosisa, Tilhun Hirphasa, Dr. Martha K. Kumsa, Na’amat Isa, Dheeressa Qixee, Genet Dheeressa, Shoro Gamachu, Edao Oboru, Damsee Tuluu, Waldayohansi Warqineh, Emiru Angose, kkf amoo Qabsoo irra mogeefaman jiru. Qaboo Oromoo gumacha tokko kan hin basiin amoo ergamtoon Habasha abba qabsoo of goodhani kayyoo jijireere jeechun Amhara fi Guragee waliin Minisoota fi Seatle keesaa guraginya siirba jiru. Baqatoon Yemen Nyataa fi bishan malee mana hidhati dararama jiran TV Yemen irrati ba’uudhan Alaba ABO qabatan nu Oromoo dha malee Ethiopia miti yamuu jeedhan falmatan Ergamtoon TPLF fi Ginbot 7 amoo USA keessa Alaba diina uftan siirbuun Gaba walaka quula dhabachu dha.
Mamakis Oromoo akka jeedhu” Dubartoon lama mucaa kan kooti kan kooti jeedhan Waqa birrati iyyatan. Waqayoo himataa isaan erga dhageefatee booda mucaa bakka lamatii muree gargari isaan hiruuf gafanan isheen tokko tole gargari nu mura yamuu jeetu isheen tokko amoo mucaa natu dhalee garuu ishee keena gargari hin murina jeete. Waqayoo haqa sun hubatee ishee mucaa gargari hin murina jeete Hadha Mucaa dhalee ta’uu mirkanese muca ishee keeneef” jeedhama. Yerro ama amoo Gantoon Abba QBO of goochuun kayyoo jijiruu fi Habashumaa Oromoo fudhachisu yaamu utalan Gootoon Oromoo Ummurii gutuu Qabsoo Oromooti cichan fi yerroo adda adda Qabsoo irra Mogefaman ta’aan amoo garan isaan gubacha jira. Abbootin qabsoo kun Qabsoo dhugga gadii dhaban kana furmata itti goochuuf Ummataa isaan fi dhaaba isaaan keessati deebiyuun sagalee isaan ol kassan dubachuu qabu.
Qabsa’oota diire hunda irrati waregama gudda kafalan Gootoota Oromoo heedu afeere jira namoon kun Amalee diree deemu waan malanf maqan isaan tareesun garii miti. Bakka boo’ta Hawwassa Oromoo, bakka bo’oota dargagoota fi shamaan, bakka boo’ta Amanta ilee wamuu yaalee jira. Waan Irrati Wal Galuu heedu Qabna
Ummaani Oromoo Bilisummuu qaba malee Habashomuu hin qabu.
Gootoon Oromoo kan hunda keenyati kabajamuu qabu;
Oromoo tokkummaa isaa tiksnee darbuu qabna malee wal facasuu hin qabu;
Bilisummaa fi Oromiyaa walabonsuuf waregama lubun bakkan geenyen,
Qabson Bilisummaa Oromoo Habasha jala hin hirirtuu;
Diina Dhifnee wal irrati hojeechuun ergama diina raawwachudha;
Tokkummaan qabsoofnee malee essa iyuu hin geenyuu kan beekuun dirqama::
GPO Oromoo OSA dhaabilee ABO akka walti arararsuu akkuma addara itti keenatee, Ummani Oromoo ilee hojii kana bakkan ga’uuf akka waan danda’uun gargaruu goochuuf. Kan Issin Wamaneef Maannee Diigumsaa, Mana Ganda fi Amanta Ijarrachuuf Miti Oromoo Salphina keessa basuu kanee malee. Waltanee hojeechuu barbana, wal ta’uu banuusi ummaani Oromoo Garbumaa Amhara fi Tgire Jala Basuun dirqama. Kana goochuuf amoo enyuun ilee hayyama hin gaafanuu. wagga waggan rakko odeesuu keessa banee Konkolata Laqi Lixee jiru keessa bafnee ofuu qabna.
2. Hawwassi Oromoo bara 12 ol gargari facayee ture keesumatu amoo bara 2008 kasee wal dura dhabachuu egalee walti finee biyya hundatii waltajii qoophesuun marii goodhe akka QBO birra dhabatuu goochuu, yerroo hormi masssa keenya keessa qoota jiru kanati hawwassa keenya wamee isiin bulchuu qabna jeedhuti, nu mana cufanee teenye wal komachuun nama salfachisa. Kanaafu yerro kami iyuu caalaa wagga kana humna keessan, yerroo keessan fi qabeenya keessa Oromoo salphina keessa basuuf akka olchitan Kabajan isiin gaafana. Utuu Beektoota Hamsii qabnuu Oromoon Amhara jala bayee Tigre jalati kufee amoo Gurageen dabaree ishee nu bituuf deemti, jaaraa 21 keessa lamiin keenya Ummataa xiiqan bitamuun dadhabbina keenya irra burqee, tokkumma dhabuu keenyatu diina nu tufachisee. Humna ta’uu dadhabuun keenya amoo bilisumma hawwinu sana akka hin arganee nu goodhe.
Erga kana beekne tokkumaa keenya cimsanee gurmuu keenya siiti ijaranee maliif hunmna ta’uu dadhabnee, kalessa wagga 2 dura diin of ijaaree yamuu hara wagga lama booda gurmuu keenya cimma wagga 40 diiguun yoo mal tanee? Diini hawwassa keenya wamee yerroo amnsisuu uni hawwassa keenya wamnee maffi dubsuu dinee. Diini keenya isaan wal malee horma (habasha) hin jalatan jeedhu uni garuu wal jalacha hin jiru, wal jala adeema hin jiru. Saba keenya kabaja hin jiru, kun siireesuu qabna. Gootoon hayuun Oromoo kabajan isiin wamanee kun nu gorsuu qabdu, Oganoon Dhaabilee Oromoo Paarlamaa keessati wal irra galagagalan diinati galgalan Paarlama keessa ta’uu turan. Biyya alati amoo Lencoo Lata fi Galasaa Dilboo utuu guyya tokko wal argani hin mariatiin Hama fi olola diinatiin wagoota 12 wal baqachuun rakko Oromoo hikuuf guyya tokko waliin dubachuu dadhaban kun siiridha? Utuu lubun jiru yoo dhaabbaanee dogogora keenya of siireesuu hin dandeenye yoomi of siireesina?
Kanaafu Wagga kana bakka Oromoon 3 ol jirutii Mariin fi Arari deemsisun, Qabsoo Bilisummaa tokkoman gegesuuf wal galee Bilisummaa Oromoo Mirkaneesun dirqama. Yerro Oromoon hunda caalaa Hamilee isaa cabee, gargarii facayee jiru kanati rakkoo ciciqoo of gidutii bassan diina Oromoo irrati hijeechun ala hojii biroo hin jiru. Marii waloon biyya hunda fi bakka hundati gegefamuu qindeesuuf Hayuulee Oromoo, Jaarsoolin Oromoo, Qabsa’oon Oromoo fi Oganooti Hawwassi Oromoo hundi
Sa’aa 20 akka sa’aa Brussel ti
Paltak Cuffa “Oromoo Gumii OPC” irrati marii irrati nu argama jeena.
Furtuu isaa Email isiin ergina.
Ernest Claesstraat 10, 2050 Antwerpen Belgium
Email: gpo.info@yahoo.com Visit our website: www.oromoparliamentarians.org